Ny Fitepon’i Polonina: Lalao Karatra Bingo Ho An’ny Fahasalamana, Fandraràna ny Alikaola, Kisoa Mena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Aogositra 2017 8:08 GMT
Nandrava ny fepotoana maina ny herinandro manontolo feno orampanàla nitsitaitaika nisintona ny ankizy ivelan'ny trano hilalao kilalaon-dririnina. Ho raharaha fohy izany satria fahadisoam-panantenana ho an'ny sasany ny ririnina raha ampitahaina amin'ny hafanana bebe kokoa ary, toy ny atoron'ny Our Man in Gdansk, azo antoka fa ho lamaody atsy aoriana kely atsy ny kilalao anaty efitrano. Zavatra tiana hatry ny ela ny kilalao toy izany fa miaraka amin'ny fiolankolahan'i Polonina, alaivo ny vola baoritra boriborinao ho an'ny ”Lalao Karatra Bingo ho an'ny Fikolokoloana Fahasalamana.”
Sento nanamaivana sy niraisan'ny rehetra avy amin'ireo blaogera maro anefa no nandraisana ny tolotra iray nolavina raha ny PM Poloney taloha kosa nandà toerana ambony iray tao amin'ny iray amin'ireo banky lehibe indrindra ao Polonina . Ny mahaliana, nambara tao amin'ny blaogy manokan'ilay mpanao politika taloha ilay fanapahankevitra (tamin'ny teny Poloney). Araka ny Polish Matters, tsy mbola ho tonga atsy ho atsy ny vaovao satria toa diso daholo ara-bakiteny, ilay hevitra manontolo:
Kanefa kosa, tsy mitondra any amin'ny fanapahankevitra hendry foana ny traikefa, hoy i beatroot. Tsy vitan'ny miseho ho diso, fa mbola nanome endrika sary ratsy tamin'ny volo, nanapaka hevitra ny hamoaka lalàna mamehy ny alikaola tao amin'ny iray amin'ireo toerana fizahantany malaza indrindra tao Polonina ny ben'ny tanàna Poloney iray.